Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. देवकोटाकाे निवासलाई स्मृति संग्रहालयका रुपमा स्थापित गरिने – Emountain TV
देवकोटाकाे निवासलाई स्मृति संग्रहालयका रुपमा स्थापित गरिने
काठमाडौं, २२ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १ सय १० औं जन्मजयन्तिको अवसरमा उनको घरलाई संग्रहालयको रुपमा राख्ने भन्दै ट्वीट गरेका छन् । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो घर अहिले कस्तो अवस्थामा छ त ?
विक्रम सवत १९६६ साल कात्तिक कृष्ण औँशी अर्थात लक्ष्मीपूजाका दिन जन्मीएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १ सय १० औँ जन्मजयन्ती बुधबार मनाइएको छ । दश वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन् ।
यी कृतिका माध्यमबाट देवकोटाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाएका छन् । उनै महाकवि देवकोटाको १ सय १० औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्वीटर मार्फत महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निवासलाई परिवारसँगको परामर्शमा उपयुक्त मुल्य तय गरी सरकारले खरिद गर्नेछ र त्यसलाई देवकोटा स्मृति संग्रहालयका रुपमा स्थापित गरिनेछ । जहाँ, उहाँजस्तो विश्वस्तरीय नेपाली साहित्यकारको जीवनसँग जोडिएका तथ्य र सामग्री संग्रहित हुनेछन् भनेर बताएका छन् ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निवासलाई परिवारसँगको परामर्शमा उपयुक्त मुल्य तय गरी सरकारले खरिद गर्नेछ र त्यसलाई देवकोटा स्मृति संग्रहालयका रुपमा स्थापित गरिनेछ । जहाँ, उहाँजस्तो विश्वस्तरीय नेपाली साहित्यकारको जीवनसँग जोडिएका तथ्य र सामग्री संग्रहित हुनेछन् ।
— KP Sharma Oli (@PM_Nepal) November 7, 2018
महाकवि देवकोटाको घर र वरिपरि रहेको जग्गा १२ आना छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते आएको महाभुकम्पको कारण उनको घर अहिले क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ । बाहिरबाट हेर्दा राम्रै देखिएपनि भित्र भत्किएर भताभुङ्ग अवस्थामा छ ।
अनि त्यही भत्किएको र चर्किएको अवस्थामा रहेको घरको दोस्रो तल्लाकोबीचको कोठामा महाकवि देवकोटाको विभिन्न फोटोहरु झुण्डिएर बसिरहेको छ । महाकवि देवकोटाका विभिन्न पुस्तकहरु दराजमा धुलाम्य अवस्थामा छन् ।
उनले प्रयोग गरेका विभिन्न सामानहरु पनि यत्रतत्र छरिएर धुलाम्य अवस्थामा नै छन् । आफ्नै घरमा बसेर, खेलेर बाल्यकाल बिताएका महाकवि देवकोटाका माहिली छोरी अम्बिकादेवी रिमाल अहिले आफ्नो घरलाई विग्रेको अवस्थामा देख्दा मन रुने बताउँछिन् ।